မိခင်များ - ဘီဇီယာ | Bezzia
မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများ၏ဘ ၀ အတွက်အရေးပါသောအခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ဘ ၀ များတွင်အလှပဆုံးအချိန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် Bezzia မှသင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးလိုပါသည်၊ သို့မှသာဤဖြစ်စဉ်ကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရန် - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နှင့်ဤအချိန်အတွင်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောသံသယများ - သူတို့မငယ်သေးသောအချိန်တွင်ကလေးငယ်များ၏ပညာရေးအထိဖြစ်သည်။
အပိုင်းမှာတော့ မိခင်များ ကလေးများရှိသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများစွာရှိလိမ့်မည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မည်သည့်အစားအစာများစားရန်၊ မစားရန်၊ ကလေးငယ်များကစားခြင်း၏အရေးကြီးပုံ၊ သွားတစ်ချောင်းမှအကျွတ်ကျသောအချိန်သို့မဟုတ်သင်ကလေးတစ် ဦး ထက်ပိုပါကမည်သို့ပြုမူရမည်နည်း။
ထို့အပြင်အကြံဥာဏ်များနှင့်အသုံး ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသာမကဘဲမိခင်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း၏ရှုပ်ထွေးသောကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ လူများစွာအတွက်အခြေအနေအသစ်တစ်ခုသို့သော်၎င်းသည်ဘဝ၏အရေးအကြီးဆုံးအချိန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ပေါင်း .
အဆိပ်ရှိသောကလေးတစ် ဦး ကိုမည်သို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်နည်း
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် Crohn's ရောဂါ
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း၌ဖြစ်ပွားသောရောဂါများသည်ကလေးငယ်များတွင် ပို၍ အဖြစ်များလာသည်။
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုသည်လူသားများအတွက်အရေးကြီးဆုံးတန်ဖိုးများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
အချို့သောအရွယ်ကလေးများသည်အိပ်မက်ဆိုးများမက်လေ့ရှိသည်မှာအတော်လေးပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားကငါသိတာဘဲ ...
အချက်အလက်များအရခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံး၏အများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ On …
ပုံမှန်အားဖြင့်မိန်းမများသည်မွေးဖွားပြီး ၄၈ နာရီအကြာတွင်သားအိမ်အတွင်းပြင်းထန်သောကျုံ့ခြင်းခံရသည်။
မိဘများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်ပိုင်းတွင်မည်သည်တို့ပါဝင်သည်ကိုသေချာစွာမသိပါ။ ဒီရှုထောင့်လုံးဝဖြတ်သန်းသွားသည် ...
ကလေးတစ် ဦး အားသင်ကြားပေးခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ၊ အဆင့်အားလုံး ...
အဆိုပါ Vicks Vaporub ၏အသုံးပြုမှု
ယာယီတက်တူးထိုးဖယ်ရှားရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း ၆ ခု
Oedipus နှင့် Electra ရှုပ်ထွေးသော, မိဘများ၏ကလေးများဆွဲဆောင်